Waa maxay Airdrop? Sidee u shaqeeyaa macruufka iyo Mac? Soo ogow! | Wararka IPhone
Luis Padilla | | macruufka 10, Casharrada iyo buugaagta
Way dhammaadeen waqtiyadii ay isticmaaleyaasha iPhone u diri kari waayeen sawirro, fiidiyoow ama faylal qalabka kale. Waa maxay AirDrop? Hawlaha hooyo ee macruufka iyo macOS oo aan ku soo diri karno waxyaabaha ku jira aad ugu kala duwan aaladaha kale, ha ahaadaan macruufka ilaa macruufka, macruufka ilaa Mac, ama ka soo to Mac ilaa Mac. Isku darka kasta waa suurtagal. Waxaan u sharaxeynaa gabi ahaanba faahfaahinta sida AirDrop u shaqeyso, aaladaha ay ku habboon yihiin, sida loo qaabeeyo xaddidaadaha si looga fogaado isku xirnaanta aan la rabin. Ma rabtaa inaad sayid la noqotid AirDrop? Gudaha waxaad ku haysataa wax kasta oo aad u baahan tahay.
1 Sidee AirDrop u shaqeysaa
2 Qalabkee la taageerayaa
3 Sida loo dejiyo AirDrop on iOS
4 Sida loo dejiyo AirDrop macOS
5 Sida loo diyaariyo qalabkaaga si aad u hesho feyl
6 Sida loo diro faylasha adoo adeegsanaya AirDrop
7 Nidaam dhakhso badan oo wax ku ool ah
Sidee AirDrop u shaqeysaa
AirDrop waxay isticmaashaa Bluetooth iyo WiFi si loo ogaado aaladaha loona wareejiyo feylasha, sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in labada xiriirba firfircoon yihiin. Bluetooth waxaa loo isticmaalaa in lagu ogaado qalabka laguna sameeyo xiriir, halka wareejinta feylka lagu sameeyo xiriirka WiFi, aad u dheereeya oo leh xawaare ballaadhan. Laakiin ha ka welwelin maxaa yeelay looma baahna in lagu xiro shabakad WiFi ah, isku xirka si toos ah ayaa loo sameeyaa inta u dhexeysa labada qalab, iyada oo aysan jirin shabakado u dhexeeya.
Qaabkan hawlgalka wuxuu u oggolaanayaa xitaa haddii aad AirDrop dhaqaajiso isticmaalka batteriga inuu aad u hooseeyo, tan iyo markii raadinta aaladaha lagu sameeyo isticmaalka yar ee Bluetooth, isku xirnaanta oo aad u fiicnaatay sanadihii la soo dhaafay isla markaana aan kharash badan ku bixin batteriga dheeraadka ah..
Qalabkee la taageerayaa
Maaddaama Bluetooth iyo WiFi loo adeegsado gudbinta feylasha, dalabyada waa inaysan sarreynin marka hore, maaddaama dhammaan kombuyuutarrada iPad, iPhone, iPod Touch iyo Mac ay leeyihiin xiriirrada noocan ah. Laakiin waxaa jira xoogaa nidaamyo iyo shuruudaha qalabka ah oo ka tagaya aalado duug ah..
Qalabka macruufka waa lagama maarmaan:
macruufka 7 ama wixii ka dambeeya
iPhone 5 ama wixii ka dambeeya
iPad 4 ama ka dib
iPad Mini 1st fac ama ka dib
Jiilka 5aad ee iPod Toch iyo mar dambe
Kumbiyuutarrada loo yaqaan 'Mac' waxaa jira shuruudo kala duwan haddii aad u diraysid Mac kale ama qalab iOS ahsida Macs u taageeraan noocyada kala duwan ee AirDrop, halka aaladaha macruufka ah ay u baahan yihiin nooc casri ah. Haddii aad ka dirayso Mac una dirto Mac waxaad u baahan tahay:
MacBook Pro Dabayaaqadii 2008 ama ka dib (marka laga reebo MacBook Pro 17 ″ Dabayaaqadii 2008)
MacBook Air Late 2010 ama ka dib
MacBook Late 2008 ama ka dib (marka laga reebo cad MacBook Late 2008)
iMac Horraantii 2009 ama ka dib
Mac Mini Mid 2010 ama ka dib
Mac Pro Early 2009 oo wata kaarka AirPort Extreme ama Mid 2010
Haddii aad rabto inaad ka soo dirto aaladda macruufka ah ee loo yaqaan 'Mac', ama dhinaca kale, waxaad marka hore u baahan tahay aaladda AirDrop ee ku habboon ee macruufka ah, horeyba kor loogu soo xusay, iyo Mac ka soo socda:
Kumbuyuutar kasta oo ka socda 2012 ama ka dib, oo leh OS X Yosemite ama ka dibMarka laga reebo Mac Pro Mid 2012.
Sida loo dejiyo AirDrop on iOS
AirDrop si ay u shaqeyso waxaa kaliya oo lagama maarmaan ah in Bluetooth iyo WiFi la hawlgeliyo. Kala fur xarunta kontoroolka oo hubi in badhanka AirDrop uu buluug yahay, oo muujinaya in soo dhaweynta ay daaran tahay. Qaabeynta kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad muujiso cida aad u ogolaaneyso inaad u dirto feylasha: qofkasta, kaliya kuwa aad ku dhex leedahay xiriiradaada, ama qofkasta (taas oo joojin doonta AirDrop). Xusuusnow haddii haku mashquulin qaabka uu daaran yahay, AirDrop si toos ah ayuu u daminayaa.
Asturnaanta dhibaato maahan, sababtoo ah diritaan kasta oo feylal ah qof kale, ha ahaato xiriir ama lama oga, waxay u baahan doontaa aqbalaadaada furitaanka qalabka. Sidaa darteed u dejinta qof walba ama kaliya dadka aad la xiriirto waxay ka dhigan tahay oo keliya in shisheeyaha aysan xitaa awoodi doonin inay kugu dhibaan ogeysiinta inay doonayaan inay kuu soo diraan feyl. Waxyaabaha muhiimka ah ayaa ah haddii aad doorato xulashada keliya ee xiriirka, waa inaad hubisaa in ajandahaaga aad ku dartay lambarka taleefanka iyo / ama emaylka la xiriira koontada iCloud ee qofka doonaya inuu kuu soo diro feylka.
Sida loo dejiyo AirDrop macOS
MacOS ahaan qaabeynta sidoo kale iskuma murugsana waxayna ku saleysan tahay isla iOS-ka marka la go'aaminayo cidda kuu soo diri karta faylasha. AirDrop waxay ku dhexjirtaa Finder, halkaasoo ay ku leedahay qayb u gaar ah safka bidix. Qeybtaan gudaheeda waxaan ku arki doonaa fursado isku mid ah sida iOS (Qofna, Kaliya laxiriirka iyo Qofkasta), oo waxaan arki doonaa aaladaha dhow ee aan qalabka u diri karno, ama cidda aan ka heli karno.
Sida loo diyaariyo qalabkaaga si aad u hesho feyl
Waxaan haynaa wax walba oo sifiican loo qaabeeyey, waxaan hubineynaa in isku xirkeena WiFi iyo Bluetooth la shaqeysiiyey, qalabkeenu waa la jaan qaadi karaa, waxaana dooneynaa inay noo soo diraan feyl. In kasta oo soo dhaweynta AirDrop loo malaynayo inay tahay "Otomatik", haddana qof kasta oo ku furaya meertada ay ku isticmaalayaan AirDrop waa inuu arkaa qalabkaaga Ilaa iyo inta xulashooyinkaaga gaarka ahi ay habboon yihiin, waxaa jira waqtiyo qofka qaata ee aan dooneyno uusan muuqan.
Haddii tani dhacdo, waxa kaliya ee aan ka codsaneyno qaataha faylka ayaa ah inaan soo bandhigno Xarunta Xakamaynta ee iOS, oo ka soo degaysa hoosta shaashadda, ama haddii aad la socoto macOS si aad u furto Raadiyaha oo aad u doorato qaybta "AirDrop" sadarka bidix. Marka tan la sameeyo waa inaan ku aragnaa shaashadda saamiga. Haddii aynaan weli arkin, waa inaad dib u eegtaa ikhtiyaariyada asturnaanta haddii ay dhacdo inaad fayl xaddidan dirto ama xitaa AirDrop naafo tahay.
Sida loo diro faylasha adoo adeegsanaya AirDrop
Marka aan xaqiijinno in qalabkeenu la jaan qaadayo AirDrop, in aan leenahay WiFi iyo isku xirnaanta Bluetooth oo la hawlgaliyay iyo in labada aaladood (diraha iyo qaataha) ay ku dhow yihiin in laga ogaado Bluetooth, waxaan bilaabi karnaa wareejinta feyl. Faylasha noocee ah ayaa la wadaagi karaa? Halkee lagala wadaagi karaa? Jawaabtu way fududahay: fayl kasta oo la jaan qaadaya nidaamka gudbinta iyo codsi kasta oo taageera xulashada wadaagga. Maaha inay ahaato codsi hooyo, codsiyada dhinac saddexaad waxay si fiican ugu diri kartaa faylasha AirDrop.
Kuwani waa tusaalayaal kooban oo ah waxa aan wadaagi karno: sawirro iyo fiidyowyo, Apple Music ama liisaska Spotify, wargeys ka soo baxa codsigiisa macruufka, bogagga shabakadda ee Safari, dukumintiyada noocyadeeda kala duwan oo laga helo iCloud Drive ... Waxaa jira xaddidaad keliya: oo aan lahayn nuqullo xuquuq leh. Waad wadaagi kartaa xiriiriyaha heesta Apple Music, laakiin ma ahan feylka heesta, isla sidaas oo kale ayaa ku dhici doonta filim kasta oo aad ku haysato iPhone-kaaga, illaa aad ku haysato arjiga kaydinta sida Dropbox ama Google Drive.
Diritaanka faylka waa mid aad u fudud. Kaliya waa inaan dooranaa feylka su'aasha ku jira, ka eeg arjiga calaamadda laba jibbaaran oo leh fallaadha (1) ka dibna riix ka dibna muuqaalka macruufka ah "Share" ayaa soo muuqan doona. Dusha sare waa inaan aragnaa kuwa wax helaya ee leh AirDrop firfircoon (haddii aysan muuqan, fiiri qeybta hore halka aan ku tilmaannay sida looga dhigayo inay muuqdaan), dooro qaataha (2) oo sug inta feylka la dirayo. Haddii ay tahay aalad isla xisaabteenna iCloud ah, diristu waxay noqonaysaa mid otomaatig ah, haddii ay xisaab kale tahay, qofka wax qaata waa inuu xaqiijiyaa rasiidka., taas oo aad sidoo kale u baahan tahay inaad furto qalabka. Dhowr ilbiriqsi kadib faylka waa la wareejin doonaa waxaana lagu xaqiijin doonaa aaladdayada (3).
On Mac nidaamka waa mid aad u la mid ah, oo leh isbeddellada muuqda sababtoo ah isku xirnaanta kala duwan ee ay leedahay. AirDrop waxay ku dhex jirtaa xulashooyinka Share ee barnaamijyadan la jaan qaadi kara, sida Safari. Sida ku jirta macruufka waxaan ku raadineynaa astaanta laba geesoodka leh fallaarta oo xulo AirDrop.
Qaatayaasha suurtagalka ah ee faylasha waxay ka muuqan doonaan daaqadda AirDrop., iyo sidii aan horeyba u sameynay, kaliya waa inaan dooranaa cida loogu talagalay oo aan dhowr ilbiriqsi sugno feylka la dirayo.
Haddii ay dhacdo in aanu jirin wax codsi ah oo laga adeegsado ikhtiyaarkaas, maxaa yeelay waa fayl, waxaan haysannaa dhawr fursadood oo aan ku adeegsanno AirDrop. Marka hore waa in la furo daaqad Raadiyaha oo xulo "AirDrop" sadarka bidix.. Waxaan arki doonaa qaatayaasha firfircoon waxaanan awoodi doonnaa inaan u soo jiido wax walboo daaqadda in loo diro iyaga.
Sidoo kale Waxaan ka dooran karnaa Faylka halka laga helo, oo adigoo gujinaya midigta dooro ikhtiyaarka «Share> AirDrop» daaqadana lagu doorto ridaha ayaa soo muuqan doonta, sida ku jirta tusaalaha koowaad.
Nidaam dhakhso badan oo wax ku ool ah
Xaqiiqdii in kabadan hal mar waxaad lawadaagtay sawirro ama fiidiyow qof kugu agdhow adiga oo adeegsanaya codsi fariin ah sida WhatsApp ama emayl. Isticmaalka xogta ka sokoow, waa inaad ogaataa in feylashaan la tuujiyey sidaas darteedna ay lumayaan tayada, waxayna kuxirantahay caymiska iyo cabirka xitaa waxay qaadan kartaa waqti dheer in la diro. AirDrop waa nidaam taas Waad u isticmaali kartaa isticmaale kasta oo iPhone, iPad ama Mac ah iyo taas oo ah mid aad u fudud oo dhakhso leh, adigoon u baahnayn inaad xiriir internet sameyso oo aan tayo lahayn., wuxuu kuu ogolaanayaa inaad faylashaas la wadaagto qof kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 10 » Waa maxay AirDrop?
Apple waxay joojineysaa lacagaha ay siiso Qualcomm illaa xukunka laga soo rido